Accounting ဆိုတာ စီးပွားရေးလောကထဲက လူတိုင်နဲ့ ရင်းနှီပြီးသား function တစ်ခုပါ…
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှယ်ယာရှင်တွေ အများအပြားပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ Organization ကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိလုပ်ငန်းအခြေအနေ Performance တွေကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့၊ မှန်ကန်သင့်လျော်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်ခိုင်မာတဲ့ Accounting System တွေ၊ Industries Experienced Accounting Professionals တွေလိုအပ်ပါတယ်…
ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများစုမှာ အဓိက ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကတော့ များပြားလှတဲ့ Day-to-Day transaction တွေကို စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်နိုင်မှုမရှိခြင်း၊ Qualified Experience Accounting Professionals ရှားပါခြင်း၊ ရှိနေတဲ့ Working Professionals များကလည်း Industries Background Experience များကွာခြားခြင်း စတဲ့ အခြေအနေများကြောင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှု အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နေကြပါတယ်…
Virtual Accounting service ဆိုတာ ဘာလဲ?
Virtual accounting ဆိုတာကတော့ လုပ်ငန်း မှာ Experienced or Qualified Accounting Professionals ခန့်ထားဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့ အခါ ဒါမှမဟုတ်များပြားလှတဲ့ Day-To-Day Account Transaction တွေကို လုပ်ငန်းမှာ ရှိနေတဲ့ Accounting Team က handle လုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့ အခါ external professional accounting team က တာဝန်ယူပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ Daily, Weekly or Monthly Finance and Accounting စာရင်းအင်းတွေကို စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
“လုပ်ငန်းမှာ ပုံမှန် Accounting ဝန်ထမ်းတွေပဲခန့်ထားတာ ပိုအဆင်မပြေဘူးလား၊ ဘာတွေပိုကောင်းသွားမှာလဲ၊ ဘာတွေပိုရသွားမလဲ” ဆိုရင်
Professional ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ကို ပေးရတဲ့ လစာငွေ Amount လောက်သာကုန်ကြပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို Manage လုပ်ဖို့ စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ ကိုယ်ပိုင် Accounting Department နဲ့ Experienced & Qualified Finance and Accounting Professional Team တစ်ခုကို ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် အလွယ်တကူအသုံးချနိုင်မယ် အခွင့်အရေး !!!
ကိုယ်ဟာကိုယ် Qualified or Experienced ရှိတဲ့ Accounting professionals တွေကိုရှာမယ် အလုပ်မှာ ခန့်ထားရမယ်ဆိုရင် အချိန်အကုန်ခံရမယ်……
နောက်သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ Industry Experience အတိုင်း Salary ကလည်း Negotiation ပေါ်မူတည်ပြီးများရင်များသလိုပေးရမယ်…
Accounting Team မှာလည်း လုပ်ငန်း အကြီးအသေးအပေါ်လိုက်ပြီး Accountant တစ်ယောက်ထဲနဲ့ လုံလောက်တာနည်းပါတယ်… Accounting Professionals နည်းနည်းပဲထားမယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့… Weekly Report တွေ၊ Monthly Report တွေ အချိန်မှီ ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး… Annual Report ဆိုဝေးလာဝေး… နောက်ဆုံး Bank Account ထဲ ငွေလက်ကျန်မရှိတော့မှသာ လုပ်ငန်းရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို Senior Management ကသိမယ့် အခြေအနေတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်…
အထက်ကပြောတဲ့ အခြေအနေတွေအားလုံးကို Matrix Solutions and Business Advisory Group ရဲ့ Accounting Professionals တစ်ယောက်ကိုပေးရတဲ့ Expense သာကုန်ကြမယ့် Virtual Accounting service ကို အသုံးပြုပြီး အခက်အခဲ မရှိကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်…
Virtual Accounting Service က ဘယ်သူတွေနဲ့ အသင့်အတော်ဆုံးဖြစ်မလဲ…
Entrepreneurs နှင့် Startup Business Owners တွေ
Organization with Large Amount of Day-to-Day Accounting Transaction တွေ (Existing Accounting Department အတွက် overload ဖြစ်နေတဲ့ Organization တွေ)
Virtual Accounting ဝန်‌ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အ‌သေးစိတ်သိရှိလိုပါက
ဖုန်း -01 8245660, 09 445533 288-289ကိုဆက်သွယ်‌ေမးြမန်းနိုင်ပါတယ် Matrix Solutions and Business Advisory Group
Room: D-E, Level 2, Bld No: 182-194, Botahtaung Pagoda Road, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar.
#Accountingservice #Finance #virtualaccounting #MXService #SME #entrepreneurs #Startup #Accounting
Creating Successful Business Without "YOU"
တော်တော်များများထင်ကြတာက လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်တာက လုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်တဲ့သူကောင်းလို့ လုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်တဲ့သူတော်လို့လို့ထင်ကြတယ်..တကယ်လည်းမှန်ပါတယ်.. လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့နောက်ကွယ်မှာ ခေါင်
လူတွေအပြောများနေတဲ့ content marketing ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ? တကယ်တော့ content marketing ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ marketing တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်. .. အရင်ဆုံး သူ့ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေးကို အရင်ဆုံ